July 2017 – Trend.com.mm
အိပ်ရာကနေမထပဲလုပ်နိုင်မယ့် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း ၇မျိုး
Posted on July 31, 2017 by Noel
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာပျင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် အိပ်ရာကနေမထပဲလုပ်လို့ရတဲ့ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း ၇မျိုးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပေးနိုင်သလိုကြွက်သားတွေကျစ်လစ်အောင်လည်းကူညီပေးပါတယ်။အိပ်ရာကနေမထပဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ပျိုမေတို့အကြိုက်ပေါ့။ ၁။မနက်အိပ်ရာကနေနိုးနိုးချင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်နေ့တာလုံးလန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာပါ။ပထမဆုံးခေါင်းအုံးကိုဖယ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါလိုလိပ်လိုက်ပါ။လိပ်ပြီးတော့ ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းခေါင်းရဲ့ အောက်မှာထားလိုက်ပါ။လက်နှစ်ဖက်ကိုခေါင်းပေါ်ကိုမြှောက်ပြီး မျက်နှာကိုပြုံးထားပါ။၂မိနစ်လောက်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူပြီးစိတ်ကိုအနားပေးပါ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on အိပ်ရာကနေမထပဲလုပ်နိုင်မယ့် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း ၇မျိုး
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချချင်တဲ့သူတွေရှောင်ရမယ့်အသီးအနှံ ၅ မျိုး
မိန်းကလေးအများစုဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချမယ်ဆိုပြီး အသီးအနှံတွေစားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘယ်အသီးအနှံကိုရှောင်ရမလဲမသိကြပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အသီးတွေစားနေပေမဲ့အလေးချိန်မကျတာပါ။ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့စဉ်းစားထားရင် ရှောင်သင့်တဲ့အသီးအနှံတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။တရုတ်ဇီးသီး တရုတ်ဇီးသီးမှာပါဝင်တဲ့ amygdalin ဆိုတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးဟာ အစာအိမ်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချချင်တဲ့သူတွေရှောင်ရမယ့်အသီးအနှံ ၅ မျိုး
ဆီလီနာ ဂိုးမက်ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ “Fetish” သီချင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ပြကွက်တွေပါဝင်နေ
Posted on July 31, 2017 by Wint
“Fetish” သီချင်းဟာ အမေရိကန်အဆိုတော် ဆီလီနာ ဂိုးမက် ပင်တိုင်သီဆိုထားပြီး featuring အနေနဲ့က Gucci Mane » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Music, PopLeaveaComment on ဆီလီနာ ဂိုးမက်ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ “Fetish” သီချင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ပြကွက်တွေပါဝင်နေ
ဘာကြောင့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေကို အမြဲတစေမစီးဖို့ပြောကြတာလဲ ?
Posted on July 31, 2017 December 7, 2018 by Wint
မိန်းကလေးတွေကြား ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့၂၀ရာစုလောက်တည်းက အလွန်ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်ဘာတွေထိခိုက်မှုရှိစေလဲ?နေ့တိုင်း ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီလိုဝေဒနာတွေခံစားလာရပါလိမ့်မယ်။ ခြေထောက်ဟာ ထောက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleTagged FeaturedLeaveaComment on ဘာကြောင့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေကို အမြဲတစေမစီးဖို့ပြောကြတာလဲ ?
ကလေးဆန်တဲ့အသွင်အပြင်ကနေ ပိုပြီးခန့်ညားတည်ကြည်လာတဲ့မင်းသားချော ပက်ဘိုဂန်း
Posted on July 28, 2017 by Noel
မင်းသားချောလေးပက်ဘိုဂန်းကတော့ မကြာသေးခင်က Love in the Moonlight ဇာတ်ကားနဲ့ပရိသတ်တွေသတိထားမိပြီး အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိထားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in K-Pop, MusicLeaveaComment on ကလေးဆန်တဲ့အသွင်အပြင်ကနေ ပိုပြီးခန့်ညားတည်ကြည်လာတဲ့မင်းသားချော ပက်ဘိုဂန်း
ခေါင်းကိုက်ရောဂါခံစားရတဲ့အခါမှာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေသောက်ကြပါတယ်။ခေါင်းခဏခဏကိုက်လို့ ရေရှည်စွဲသောက်ရင် ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ဆေးသောက်စရာမလိုပဲ ၅မိနစ်အတွင်းခေါင်းကိုက်ပျောက်စေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ဆေးကျောင်းသားတွေကအတည်ပြုထားပြီးလက်တွေ့ကောင်းမွန်သွားတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပါပဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ပထမဆုံးစိတ်ကိုလျှော့ပြီးသက်တောင့်သက်သာနေပါ။ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကြောလေးတွေကိုနှိပ်နယ်ပေးရုံပါ။ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအနီစက်နေရာကို ၁မိနစ်လောက် စက်ဝိုင်းပုံစံနှိပ်နယ်ပေးရုံပါပဲ။နှိပ်ပြီးလို့ ၅မိနစ်ကနေ ၁၀မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုက်ရောဂါဟာယူပစ်သလိုပျောက်ကင်းသွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောနေရာလေးတွေရှိပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ဆေးသောက်စရာမလိုပဲ ၅မိနစ်အတွင်းခေါင်းကိုက်ပျောက်နည်း
ကျန်းမာလှပတဲ့ရင်သားတွေရရှိစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ၅မျိုး
ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရပါမယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက် လှပတဲ့ရင်သားတွေရရှိစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်း ၅မျိုးကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ရေအေးနဲ့ချိုးပါ ရေအေးနဲ့ချိုးတာကသက်တောင့်သက်သာမဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တော့အသားအရေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ရေအေးနဲ့နေ့တိုင်းမချိုးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ရေခဲရေဆွတ်ထားတဲ့အ၀တ်စ၊ရေခဲတုံးလေးတွေနဲ့ ရင်သားကိုနှိပ်နယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ကျန်းမာလှပတဲ့ရင်သားတွေရရှိစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ၅မျိုး
Posted on July 28, 2017 July 28, 2017 by Pyone Thinzar Yi
အဆိုတော်ပိုပိုဟာ အခုဆိုရင်ဂီတပိုင်းတင်မကပဲ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုပါခြေလှမ်းစနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ ကြောက်ကြောက် ကြောက် ဇာတ်ကားကြီးဟာလည်း မကြာခင်ရုံတင်တော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Interviews, Movies, YollywoodTagged Featured, ပိုပိုLeaveaComment on တောသူမကာရိုက်တာကို သရုပ်ဆောင်ရတာ ခက်ခဲတဲ့အတွက် ငြင်းလေ့ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော်ပိုပို
အသားရေက ဖြူသည်ဖြစ်စေ၊ ညိုသည်ဖြစ်စေ စိုစိုပြေပြေလေးနဲ့ ချောမွေတဲ့အသားရေမျိုးဆို တကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ အသားရေမွဲခြောက်လို့ ၊ စိုပြေမှုမရှိလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on လှပပြီး ချောမွေ့တဲ့အသားရေလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် လျှိုဝှက်ချက် (၇)မျိုး
” Wish Upon ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ၂ဝ၁၇ အမေရိကန် သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်၊ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြည့်ရမယ့် ” Wish Upon ”